Worraaqsa Bineensotaa - Animal Farm in Afaan Oromo - OPride.com
Editor’s note: Good news for all who wish to see Afaan Oromo develop and reach the literary height it deserves. Novelist Amaan Hedatoo has translated and narrated GEORGE Orwell’s timeless political satire, Animal Farm, into Afaan Oromo. Orwell’s masterpiece satire, about an uprising of farm animals against their (human) masters, was a rare illustration of how tyranny replaces itself after every revolution and power corrupts even the noblest of men. Animal Farm remains vividly relevant today as it was in 1945. We hope that the Oromo people, a subjugated majority still trying to regain its rightful place in Ethiopian empire, will find this beautifully narrated and translated fable entertaining, educational, and relevant.
Worraaqsa Bineensotaa – “Animal Farm” in Afaan Oromo
Translated and narrated by Amaan Hedatoo Qeerransoo*
“George Orwell” jedhama. Maqaa qalamaa /pen name/ Eric Blair jedhamuunillee beekkama. Asoosama gaggabaa /Essays/ fi Asoosamman dhedheeraa /Novels/ barreessee dhalootaaf dabarse heddu qaba.
Bara 1930 “Down and out in Paris & London“
Bara 1934 “Barmesse Days”
Bara 1935 “A clergy man’s Dauhgter”
Bara 1936 “Keep the Aspidistra Flying”
Bara 1937 “The road to Wigan pier”
Bara 1938 “Homage to Catalonia”
Bara 1939 “Coming up for Air”
Bara 1940 “Inside the Whale & other essays”
Bara 1950 “Shooting the elephant & other essays”
Bara 1953 “Such & such were the joys” .... jedhamanii fi kanneen biraatti dabalee kitaabbilee barri hin daangessine kanneen Kooministoota fi diktaataroota barasii golee addunyaa mara turanitti xiyyeeffatan “ANIMAL FARM” fi “NINTEEN EIGHTY FOUR” jedhaman barreessee ture. Kitaabbileen kunniin eega barreeffamanii wolakkaa jaarraa tokkoo dabraniiran. Garuu ka nama ajaa’ibu, diktaataroonni kaleessa “George Orwell” kitaaba Qaartee yookiin riqaa /satire/ “Animal Farm” akkasumas Asoosama /Novel/ “Ninteen Eighty Four” keessatti akeeke ardhallee golee addunyaa tanaa heddu irra jiraachuu qofa uduu hin taane sammuu bara namni kun kitaabbilee kana barreesseetiin ummattoota bulchaa jiraachuu isaaniiti. Hujii Og barruu nama kanaa keessaa Kitaabni “Animaal Farm” jedhu, ka qaarteen yookiin riqaan /satirically/ beelladoonni ilma namaatti akka fincilan ibsu kun afaanota addunyaa tanaa heddutti hiikkamee dubbifameera. Fiilmiin ittiin dalagamee daaw’atameera.
Egaa Og barruun afaan tokkorraa gara afaan biraa hiikkamu ummata aadaa, seenaa, fi jiruu-jireenna wol hin fakkaanne qabu heddu wol barsiisuu bira taree guddinna afaan tokkootiif gumaachi inni qabu laayyoo miti. Kana biratti kitaabbilee afaan tokko irraa gara afaan biraa hiikkaman dubbisuus ta’ee caqasuun hubannoo baldhifachuu bira taree ka’umsa waan biraallee ta’uu danda’a.
Anillee kanumarraa ka’uudhaan hujii Og barruu ka “George Orwell” keessaa isuma “Animal Farm” jedhu kana mata duree kenneefii “WORRAAQSA BINEENSOTAA” jedhee Afaan Oromootti hiike. Hiikkamuu qofaa miti. Ni Seeneffames. Hiikuu irratti haga danda’ameen yaanni kitaabichaa akka hin jijjiiramne yaalameera. Barreessaan Kitaabichaa bara 1903 tti dhalatee bara 1950 tti boqate. Hujiin isaa ammoo daangaa barootaa qaxxaamuree dhaloota dhufan heddullee dhaqqabuuf waan deemu fakkaata. “Hujii isaa kana Oromoonillee afaan isaatiin dhagayuu qaba!” ka jedhu natti muldhannaan hiikee seenesse. Caqasuudhaaf saa’aa sadihii fi cinaa fudhata. Garuu akka caqasuuf tolutti gaggabaabbatee kutaalee kudha-lamatti qoodameera. Yeroo barbaadanitti kutaa duraa caqasanii, ka itti aanutti taruuf yoo yeroon hin aanjine ta’e rakkoon hin jiru. Bakkuma itti dhaabatan irraa ka’uudhaan kutaa itti aanu caqasuun hin dhibu. Guddinna Afaan Oromootiif bu’aa woyii qabaa laata? WORRAAQSA BINEENSOTAA- “ANIMAL FARM” isinitti jaba jedheera!
Nama kitaaba kana hiikee seenesse dubbisuu yoo barbaaddan abgannaa@yahoo.com yookiin 281-702-9227 tti fayyadamaa.
*Amaan Hedatoo Qeerransoo is an author and linguist. His first book, “Lallaba Hin Dhagayamne“, is now available in paperback in Minneapolis and Houstin, TX.
Afaan Oromo afaan oromo noble Amaan Hedatoo Qeerransoo animal farm animal farm in afaan oromoo animal farm in Oromo george orwell oromo Worraaqsa Bineensotaa
SIIFAN …Walaloo fi Asosamoota Yaasoo Kabbabaa